Bill Gates iyo xaaskiisa Melinda ayaa shaaciyay in ay soo afjarayaan guurkooda, kadib markii ay wada joogeen muddo 27 sano ah. Waxa ay sheegeen in "aanay u muuqan inay ka lammaane ahaan horumarkooda ka shaqeyn karaan".
"Kadib dedaal dheer oo ku aaddan xiriirkeena, waxaan go'aansanay in aan kala tagno," ayay ku shaaciyeen baraha ay ku leeyihiin Twitter.
Waxa ay isu dhaleen saddex carruur ah, si wadajir ah ayayna u maamulaan hay'adda samafalka ee Bill & Melinda Gates oo ah tan ugu weyn caalamka.
Hay'adda ayaa balaayiin doollar ku bixisay la dagaallanka cudurrada iyo dhiiragelinta tallaalka carruurta.
"27-kii sano ee la soo dhaafay, waxaan korinay saddex canug oo aad u wanaagsan, waxaana samaynay hay'ad ka hawlgasha guud ahaan caalamka, dadkana u sahasha inay helaan noolal caafimaad iyo wax soo saar leh," ayay ku sheegeen war qoraal ah oo ay wadajir u soo saareen.
"Waxaan ka sii wada shaqeyn doonnaa hay'adda, balse nooma muuqata in aan lamaane ahaan horumarkeena ka sii shaqeyn karno wejiga xiga ee noolasheena", ayaa lagu yiri warka qoraalka ah.
Sidee ayay isku barteen?
Melinda ayaa sheegtay in Bill uu inta ay wada socdeen u soo bandhigay "faa'iidada iyo dhibaatooyinka uu leeyahay guurka".
Bill iyo Melinda Gates
Maxay tahay hay'adda Gates Foundation?
Lammaanaha ayaa hay'adda Bill & Melinda Gates Foundation sanadkii 2000 ku asaasay magaalada Seattle
Hantida hay'adda ayaa sanadkii 2019 lagu qiyaasay 43 bilyan oo dollar
Muddo sanado ah, Bill iyo Melinda ayaa ku bixiyay hay'adda lacag ka badan 36 bilyan oo dollar